बाआमा जेलमा, छोरा हिरासतमा | चितवन पोष्ट दैनिक
बाआमा जेलमा, छोरा हिरासतमा
२०७० चैत्र १२, बुधबार ०१:१३ गते
भरतपुर । शक्तिखोर गाविस वडा ५ बस्ने अमृता प्रजा र उनको श्रीमान् वीरबहादुर प्रजा अहिले भरतपुर कारागारमा रहेका छन् । झण्डै ३ वर्षको कैद भुक्तान गरेपछि २०६७ भदौमा अमृता छुटिन् । तत्कालीन समयमा उनलाई खाग किनबेचमा संलग्न भएको आरोपमा वन कार्यालयको आदेशले ३ वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । त्यसको केही समयपछि उनको श्रीमान् वीरबहादुर पनि यसै मुद्दामा जेल चलान भए । वीरबहादुरलाई ५ वर्षअघि १५ वर्ष कैद र १ लाख जरिबानाको फैसला सुनाइयो ।
श्रीमान् १५ वर्ष कैद सजाय भोगिरहेको अवस्थामा झण्डै ३ वर्ष जेल बसेर छुटेकी अमृता गत माघ २६ गते पुनः पक्राउ परिन् । उनीमाथि फेरि पनि गैंडा मारी खाग बेचबिखनको अभियोग लगाइएको छ । निकुञ्जमा एउटै शीर्षकमा २ फरक मुद्दा उनीमाथि लागेको छ ।
पूर्पक्षका लागि अमृता अहिले भरतपुर कारागारमा छिन् । जहाँ उनको श्रीमान् वीरबहादुर ५ वर्षदेखि १५ वर्षको कैद भुक्तान गर्न बसिरहेका छन् । बाबुआमा नै गैंडा शिकार तथा खाग बिक्रीको अभियोगमा जेलजीवन बिताइरहँदा उनीहरुको छोरा तारा प्रजा गत ७ गते चितवन प्रहरीबाट पक्राउ परे ।
एक थान पेस्तोलसहित पक्राउ परेका तारालाई डाँका मुद्दा र हातहतियार मुद्दा चलाइएको छ । उनीमाथि डाँकासम्बन्धी दुइवटा घटना गराएको अभियोग प्रहरीले लगाएको छ । उनी अहिले चितवन प्रहरीको हिरासतमा छन् । यस्तो अभियोग पुष्टि भएमा डाँका मुद्दामा बिगो बराबरको जरिबाना र अधिकतम् १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । त्यस्तै, हातहतियार खरखजना मुद्दामा १ लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना र ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । अभियोग पुष्टि भएमा ताराको भेट बाआमासँग अब भरतपुर कारागारमा हुनेछ ।
गत फागुन २८ गते बेलुकी दारेचोक गाबिस वडा नं.९ फिस्लिङस्थित मुग्लिन–काठमाडौँ सडकखण्डमा पेस्तोल देखाई बहुमूल्य धनमाल लुटपाट गरेको अभियोग तारामाथि लागेको छ । लुटिएको धनमालमा सुनको सिक्री, औठी, चुरा, मोबाइल सेट र क्यामेरासमेत रहेको प्रहरीले जनाएको छ । भनपा १० हिमालीपथ बस्ने २८ वर्षीय दीपकचन्द्र थापा र सोही ठाउँ बस्ने २२ वर्षीय जनक श्रेष्ठको निर्देशनमा शक्तिखोर गाविस वडा नं. ५ नयाँ टाँडी बस्ने वर्ष २३ को तारा चेपाङ भनिने वीरमान सिङ प्रजाले घरेलु बनावटको पेस्तोल नाल १ र गोली २ राउण्ड पर्सा जिल्लाको वीरगन्जबाट दस हजार रूपैैयाँमा किनेर ल्याएको प्रहरीको भनाइ छ ।
२८ गते साँझ पाँच बजेको समयमा जिल्ला चितवन भरतपुर नगरपालिका वडा नंं. १० स्थित एलाइभ अस्पताल भरतपुर (बिएण्डबिको शाखा अस्पताल) को चिया पसलमा दीपकचन्द्र थापा, वीरमान सिङ प्रजा, गोरे चेपाङ र रूपन गिरी बसी बेलुका मुग्लिनतर्फ गई सानो सवारी साधन लुटपाट गर्नुपर्छ भन्ने योजना बनाइ गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
योजनाकारको निर्देशनमा तारा प्रजाले चलाएको ग ४ प ६७६० नम्बरको एफजेड मोटरसाइकलमा रूपन गिरी र गोरे तामाङले चलाएको ना १९ प ६२८९ नम्वरको पल्सर मोटरसाइकलमा संगम गुरूङ बसी गई मुग्लिनबाट पिछा गर्दै फिस्लिङमा पुगी बा ११ च ६९२ नं.को कारलाई रोकी तारा चेपाङ्गले पेस्तोल देखाई सुनका गरगहना र मोबाइलसमेत लुटपाट गरी घटनास्थलबाट फरार भई सोही राति भरतपुर आइबसेको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यस्तै, चैत ५ गते कविलास गाविस वडा नं.४ केराबारी स्थित नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा भारतीय टाटा सफारी गाडीलाई जबरजस्ती रोकी पेस्तोल देखाइ गाडीमा भएका मानिसहरुको सुनको गहना, मोबाइल तथा नगद लुटी लगेको तारा चेपाङमाथि अर्को अभियोग पनि लागेको छ ।